निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले सुडानको डार्फर मिसनमा सुरक्षाकर्मीको लागि गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तीनजना पूर्व आईजीपीसहित नौजनालाई जेलसजायको फैसला गरेको थियो । अहिले अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा सहसचिव चूडामणि शर्मामाथि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको खुल्न आएको छ । यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् किनकि नेपालको न्यायालय, कर्मचारीतन्त्रलगायत प्रत्येक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अपवादबाहेक जीवन गुजाराको लागि समस्या नभएका सम्मानित र संवेदनशीन उच्च ओहोदामा पुगेकाहरू किन भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिन्छन् ? आईजीपी, डीआईजीलगायतका उच्चपदस्त कर्मचारीले आफूअनुकूल सरकार र सरकारी संयन्त्र नभएपछि भविष्यमा दण्डित हुनुपर्छ भन्ने कुरा किन मनन गर्न सक्दैनन् ? भ्रष्टाचारलाई नियतिको रूपमा स्वीकार गरिरहेका जनताको मनोविज्ञानमा कसरी परिवर्तन गर्ने ? समाधानको लागि वैचारिक बहस गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।